I-Olympia, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeOlympia
Bukela ividiyo nge-Olympia
Hlola i-Olympia ebhalwe njengendawo yamagugu omhlaba futhi iyidolobhana elisePenoponnese peninsula in Greece. 'Esigodini SikaNkulunkulu' kukhona indawo engcwele egujwa kakhulu yaseGrisi yasendulo, nendawo lapho kuzalwa khona umcimbi obaluleke kakhulu wabasubathi wezikhathi zonke; Imidlalo yama-Olimpiki. I-Olimpiya ingenye yezindawo ezaziwa kakhulu izivakashi eGrisi, futhi ingenye yamagama omkhiqizo anamandla emhlabeni jikelele owaziwa ngendawo eseduze yemivubukulo yegama elifanayo, eyayiyindawo enkulu yenkolo yasePanHellenic yasendulo yaseGrisi.
I-Olympia itholakala kalula kusuka kwezinye izindawo ezithakazelayo Greece. Kuseningizimu empumalanga futhi kungaphansi kwamahora we-4 kude Athens. Indawo ngokuyinhloko yanikezelwa kuZeus futhi yaheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba wamaGrikhi. Uqukethe ukuhleleka okuthile kokuphazamiseka kwezakhiwo, okubaluleke kakhulu okuyiThempeli likaHera, iThempeli likaZeus elinesithombe sikaZeus (chryselephantine enkulu (indlovu negolide kuhlaka lokhuni, olwabizwa ngokuthi yi-7) izimangaliso zomhlaba wasendulo, lapho kwenziwa khona imihlatshelo emikhulu kunayo yonke) nePelopion .Kwase kusekhona indawo enhle yezindawo ezivulekile noma zokhuni ngaphakathi kwengcwele.
Imidlalo ye-Olimpiki yayiqhutshwa njalo ngeminyaka ye-4 kuyo yonke inkathi yasendulo, kusukela ngekhulu le-8th BC kuya nge-4th century AD.
Indawo yemivubukulo ebibambe ngaphezulu kwe-70 izakhiwo ezibalulekile, namanxiwa amaningi alezi asekhona, yize iThempeli likaZeus elisindayo lisinda kuphela njengamatshe phansi.
Ubufakazi bokuqala bomsebenzi wokwakha ngezinsuku zesayithi kusuka kuzungeze i-600 BC ngethempeli likaHera. Amagugu okugcina imali kanye nePelopion akhiwa phakathi nekhulu le-6th BC. Inkundla yokuqala yakhiwa ngase560 BC. Bekuqukethe ithrekhi elula nje. Inkundla iphinde yakhiwa kabusha nge-500 BC enezinhlangothi ezishayo zababukeli futhi yaguqukela empumalanga kancane. Ekuhambeni kwekhulu le-6th BC uhla lwemidlalo lungeziwe emkhosini wama-Olimpiki.
Ngesikhathi se-Classical phakathi kwe-5th ne-4th century BC, kwakuyinkathi yobukhazikhazi bendawo e-Olympia. Kwakhiwa inqwaba yezakhiwo ezintsha zenkolo nezomhlaba kanye nezakhiwo.
Ithempeli likaZeus lakhiwa maphakathi nekhulu le-5th BC Ubungako, ubukhulu kanye nokuhlobisa kwakwedlula noma yini eyakhiwe ngaphambili esizeni. Kwakhiwa nezinye izindawo zemidlalo, kufaka phakathi ukuqala kwenkundla kanye ne-hippodrome (yokugijimisa izinqola). IPrytaneion yakhiwa ohlangothini olusenyakatho nentshonalanga yesiza e-470 BC. Izindawo zokugeza zamaGrikhi zakhiwa maphakathi nekhulu le-5th BC
Ekupheleni kweklasi sekwephuzile, kwafakwa ezinye izakhiwo esizeni.
Ngekhulu le-4th ngasekupheleni kuka-BC kwabonwa ukwakhiwa kwePhilippeion. Eduze kwe-300 BC isakhiwo esikhulu kunazo zonke esizeni, i-Leonidaion, sakhiwa ukuhlalisa izivakashi ezibalulekile. Ngenxa yokubaluleka okukhulayo kwale midlalo, kwakhiwa ezinye izakhiwo zemidlalo kubandakanya iPalaestra (3rd century BC), Gymnosec (2nd century BC) nezindlu zokugeza (c.300 BC). Ekugcineni, ngo-200 BC, kwakhiwa ithala elihlanganisiwe elihlanganisa umnyango wenkundla nendawo engcwele.
Ngenkathi yamaRoma, imidlalo yavulelwa zonke izakhamizi zase
Umbuso wamaRoma. Kwaqala uhlelo lokwakhiwa kwezakhiwo ezintsha nokulungiswa okukhulu, kufaka phakathi iThempeli likaZeus.
Ikhulu le-3rd labona lesi siza sathola ukulimala okukhulu kusuka kuchungechunge lokuzamazama komhlaba. Izizwe ezihlaselayo ku-267 AD zaholela enkabeni yesayithi yaqiniswa ngezinto ezibiwe ezikhumbuzweni zayo. Ngaphandle kokubhujiswa, umkhosi wama-Olimpiki uqhubekile ukwenziwa endaweni kuze kube yi-Olmpiad yokugcina e-393 AD,